China XMT-608 Series Universal Input Type Intelligent okpomọkụ njikwa Manufacturer na Supplier | Gongyi
Intelligent okpomọkụ njikwa
Universal Input Type Intelligent okpomọkụ njikwa
Multi Way Intelligent okpomọkụ njikwa
Single Input Type Intelligent okpomọkụ njikwa
Intelligent programmable okpomọkụ njikwa
Multi Way Intelligent okpomọkụ na-ejegharị ejegharị ịchọputa njikwa
Digital Display okpomọkụ njikwa
Digital Display ElectronicTemperature njikwa
Digital Display Abụọ Nzọụkwụ okpomọkụ njikwa
Pointer okpomọkụ njikwa
Bọtịnụ pointer okpomọkụ njikwa
Akpu pointer okpomọkụ njikwa
Single pointer okpomọkụ njikwa
iru mmiri njikwa
Ọgụgụ isi iru mmiri njikwa
Digital Display iru mmiri njikwa
Intelligent okpomọkụ ma na iru mmiri njikwa
Intelligent LCD okpomọkụ ma na iru mmiri njikwa
Intelligent PID okpomọkụ ma na iru mmiri njikwa
Intelligent Abụọ Nzọụkwụ okpomọkụ ma na iru mmiri njikwa
Industrial ụdị okpomọkụ mmetụta
Pressure Type okpomọkụ mmetụta
Ịghasa Type okpomọkụ mmetụta
Tube Type okpomọkụ mmetụta
Simple Type okpomọkụ mmetụta
iru mmiri mmetụta
Single iru mmiri mmetụta
CU50 High molekul okpomọkụ ma na iru mmiri mmetụta
PT100 High molekul okpomọkụ ma na iru mmiri mmetụta
PT100 PT100 okpomọkụ ma na iru mmiri mmetụta
Ugboro abụọ Oge Control Intelligent Time Relay
Ugboro abụọ Oge Control Digital Display Time Relay
SBW Series okpomọkụ Transmitter
SCR voltaji regulator
ZK ụdị SCR voltaji regulator
AQZ Safety ngere
Atọ-adọ Multi-ọrụ Panel Meter
ZW Series Atọ-adọ Multi-ọrụ Panel Meter
ZK Type SCR voltaji regulator
XMT-3000 Series Single Input Type Intelligent Iwe Iwe Ọkụ ...
FC-040 Single Input Type Intelligent okpomọkụ Con ...
EU-08 Universal Input Type Intelligent okpomọkụ ...
XMT-608 Series Universal Input Type Intelligent okpomọkụ njikwa
XMT * 608 usoro Intelligent okpomọkụ njikwa Operation InstructionⅠ, SurveyThanks gị nhọrọ nke anyị XMT * 608 usoro ọgụgụ isi okpomọkụ controller.XMT * 608 usoro ọgụgụ isi okpomọkụ njikwa, bụ abụọ n'usoro 3-Ikanam ngosi, karị egosipụta okpomọkụ n'ihe uru ...
XMT * 608 usoro Intelligent okpomọkụ njikwa
Daalụ maka gị nhọrọ nke anyị XMT * 608 usoro ọgụgụ isi okpomọkụ njikwa.
XMT * 608 usoro ọgụgụ isi okpomọkụ njikwa, bụ abụọ n'usoro 3-Ikanam ngosi, karị egosipụta okpomọkụ n'ihe uru (PV) na okpomọkụ set uru (SV) n'okpuru nkịtị mode; Mgbe ọ bụ oge okpomọkụ akara, karị egosipụta okpomọkụ n'ihe uru (PV) na-agba ọsọ oge gụọ ala (SV), na-enye iche iche nke oge akara usoro nhọrọ; The njikwa nwere ike input iche iche nke mgbaàmà nke na-eji weba, ọ ịmụta ON / Gbanyụọ (P = 0 时), PID akara, ikwe mfe oke ọnọdụ na-adaba adaba inputting, na ọtụtụ-eji n'elu okpomọkụ akpaka akara usoro nke ígwè, chemical, egbuke, ìhè ulo oru mbo, nkà mmụta banyere ígwè, petrifaction na okpomọkụ omume na na.
Ⅱ, Main technical index dị iche iche
1, mmesho ndiiche: ± 0.5F · S ± 1, ọzọ oyi ọgwụgwụ compensating ndiiche ± 1 ℃
2, Input (nwere ike họrọ): CU50 (-50 ~ 150), PT100 (-80 ~ 600), K (-30 ~ 999), E (-30 ~ 700),
3, Relay mmepụta (n'ezinụlọ) kọntaktị ikike: AC250V 5a (eguzogide ibu) oge 2 ~ 120s pụrụ ịgbanwe.
4, Time nso: 0 ~ 999s ma ọ bụ 0 ~ 999m (nwere ike họrọ)
5, Ịkwọ ụgbọala siri ike agba anọ mgbaàmà mmepụta: Ịkwọ ụgbọala eletrik> 15mA dịghị-ibu voltaji> 12V, oge banyere 2S.
6, Work ike: 110V ~ 242V, 50HZ Power oriri <3W
7, ebe ọrụ: 0 ~ 50 ℃, ikwu humidity≤85%, enweghị corrode na ike electric radieshon.
Ⅲ, njikwa panel
1, njikwa panel (maka akwụkwọ) 2, Connection (n'ihi na akwụkwọ)
★ njikwa ' s kpọmkwem njikọ ga-egosi na ikpe ' s njikọ
Ⅳ, Meaning nke nlereanya koodu
1: n'elu akụkụ
Oghere: 160 × 80 × 85 Nwụnye oghere 156 × 76
A: 96 × 96 × 80 Nwụnye oghere 92 × 92
D: 72 × 72 × 80 Nwụnye oghere 68 × 68
E: 48 × 96 × 75 Nwụnye oghere 44 × 92
F: 96 × 48 × 75 Nwụnye oghere 92 × 44
G: 48 × 48 × 110 Nwụnye oghere 44 × 44
S: 80 × 160 × 85 Nwụnye oghere 76 × 156
B : 60 × 120 × 90 Nwụnye oghere 56 × 116
L: Standard DIN35mm ndu ụzọ echichi
C : 80 × 120 × 35 mgbidi set echichi
2: Operation ngosi usoro: '6' 3-isi nwayọọ push-mgba ọkụ ọnọdụ, abụọ n'usoro 3-Ikanam digital ngosi, PID akara.
3: Ndị ọzọ na mkpu:
'0' ọ dịghị mkpu;
'1' elu ịgba mkpu (elu ndiiche mkpu mgbe ọ bụ oge okpomọkụ akara)
4: Input : '8' input mgbaàmà nwere ike Mgbanwerịta free (dịghị voltaji na ugbu a ọsọ ọsọ)
5: suffix oghere: ọsọ agba anọ mmepụta G: siri ike agba anọ mmepụta T: Time akara ọrụ
Ⅴ, Inner oke mpempe akwụkwọ 5-1
1, Mee njikwa njikọ na ike esenyịn, mmetụta na-achịkwa akaghị, na-eme ka ike na, na njikwa ga-amalite mwube onwe ya maka 1S.
2, Mgbe-emecha mwube onwe ya, na njikwa ga-aba nkịtị e ji atụ ala, elu n'usoro PV window ngosi e ji atụ uru, na ala n'usoro SV window ngosi set uru.
3, The mbụ menu
A, Oge set uru mgbanwe
Common okpomọkụ akara mode: Press ▲ ma ọ bụ ▼ maka 3S gbanwee set uru, elu n'usoro PV window ngosi n'ihe bara uru, na ala n'usoro SV window ngosi set uru, pịa ▲ ma ọ bụ ▼ gbanwee, ogologo oge ka pịa nwere ike mee ngwangwa plus ma ọ bụ mwepu . Mgbe mgbanwe, pịa WEPỤTARA ịzọpụta na ụzọ ọpụpụ. Ọ bụrụ na adịghị pịa igodo ọ bụla, ọ ga-azọpụta na wepuÚ-akpaghị aka mgbe 10s.
Oge akara mode: Press ▲ maka 3S ịbanye okpomọkụ ka uru mgbanwe ala, elu n'usoro PV window ngosi oke mmasị "", na ala n'usoro SV window ngosi oke uru, pịa ▲ ma ọ bụ ▼ gbanwee, ogologo oge ka pịa nwere ike mee ngwangwa plus ma ọ bụ mwepu. Mgbe mgbanwe, pịa WEPỤTARA ịzọpụta na ụzọ ọpụpụ. Ọ bụrụ na adịghị pịa igodo ọ bụla, ọ ga-azọpụta na wepuÚ-akpaghị aka mgbe 10s.
★ B, Oge set uru mgbanwe (mgbe ọ bụ oge & okpomọkụ akara)
Press ▼ maka 3S ịbanye oge ka uru mgbanwe ala, elu n'usoro PV window ngosi oke mmasị "", na ala n'usoro SV window ngosi oke uru, pịa ▲ ma ọ bụ ▼ gbanwee, ogologo oge ka pịa nwere ike mee ngwangwa plus ma ọ bụ mwepu. Mgbe mgbanwe, pịa WEPỤTARA ịzọpụta na ụzọ ọpụpụ. Ọ bụrụ na adịghị pịa igodo ọ bụla, ọ ga-azọpụta na wepuÚ-akpaghị aka mgbe 10s.
Ne oke ọnọdụ (zuru ezu na-ezo aka Sheet5-1)
(1) Nke abụọ menu
Press WEPỤTARA 3S ịbanye abụọ menu, elu n'usoro window ngosi oke koodu, na ala n'usoro window ngosi oke uru, pịa ▲ ma ọ bụ ▼ gbanwee, ogologo oge ka pịa nwere ike mee ngwangwa plus ma ọ bụ mwepu. Mgbe mgbanwe, pịa WEPỤTARA ịzọpụta na ụzọ ọpụpụ. Ọ bụrụ na adịghị pịa igodo ọ bụla, ọ ga-azọpụta na wepuÚ-akpaghị aka mgbe 10s.
(2) Nke atọ menu
Press WEPỤTARA + ▲ ịbanye atọ menu, mwube usoro bụ otu ihe ahụ dị ka n'elu.
4, Isetịpụ onwe ya
First ịtọ ofu uru, na ibà menu, setịpụrụ na, Na ìhè bụ na, na njikwa banye mwube onwe ya ala, ka laghachi iche banyere 0,5 ~ 1 , ebe a na-njikwa bụ ON / Gbanyụọ akara, mgbe ugboro atọ oscillation, ọhụrụ oke ,, nwere ike enen na-azọpụta, AT ìhè na-apụ, na njikwa na-nrụpụta na-abanye n'ime na-achịkwa ala.
★ 6, Oge akara ọrụ (mgbe ọ bụ oge & okpomọkụ akara):
Bee oge akara n'akụkụ n'oge ọ bụla, na oge ga-esi azụ ahụ mbụ ala; Mgbe na-oge akara n'akụkụ, onye njikwa ga-agba ọsọ dị ka mwube oge gụọ ala.
Ⅶ ,F ault A nalysis na C learance
XMT * 608 ịmụta elu mmepụta usoro, na ndị nwere ike ule tupu ịhapụ factory, ọ mma ntụkwasị obi nke mita .Onye na mbụ kpatara mere site na-ezighị ezi na ime ihe ma ọ bụ oke ọnọdụ bụrụ na ị na-ahụ kpatara-apụghị ịnagide, biko idekọ ya, na kọntaktị na gị n'ụlọnga ma ọ bụ anyị. Mpempe akwụkwọ 7-1 bụ na mbụ kpatara nke XMT * 608 na kwa ngwa:
Sheet7-1 Common kpatara mkpofu
★ ikwu: Anyị ụlọ ọrụ ga-mma ngwaahịa technology, imewe na nkọwapụta ahụ, ọ bụ gosi na ihe.
Mmasị 1: Statement of mita si oke ntị akwụkwọ ozi na English ozi
Previous: XMT-308 Series Universal Input Type Intelligent okpomọkụ njikwa
Next: XMT-808 Series Universal Input Type Intelligent okpomọkụ njikwa
Digital Pid okpomọkụ njikwa
Din Okporo ígwè okpomọkụ njikwa
Pid okpomọkụ njikwa
Pid okpomọkụ njikwa N'ihi oven
Pid okpomọkụ njikwa , Pid okpomọkụ njikwa N'ihi oven , Digital Temperature Controller, 4-20ma Pt100 Temperature Transmitter, okpomọkụ njikwa, All Products